E nwere ihe banyere multicolored ụlọ na quaint, cobbled n'okporo ámá nke Cremieux n'okporo ámá na anam-etinye gị igwefoto ala-agaghị ekwe omume! Nke a ọmarịcha Paris n'okporo ámá a na-agbakọta na pinks, elu, edo edo, na blues, ọ bụla na agba ka dakọtara ọ bụla ekike maka na obligatory oge ịse foto. Eme ya n'ihi na gram, ụmụ okorobịa!
Via Toledo bụ okporo ụzọ ochie na otu n'ime ụzọ ịzụ ahịa dị mkpa n'obodo Naples, Italy. Nke a 1.2 kilomita nke n'okporo ámá bụ otu n'ime ihe ndị kasị mma Okporo ámá Na Europe. Ọ na-amalite na Piazza Dante na-agwụ na Piazza Trieste e Trento, nso Piazza del Plebiscito.
Ivy kpuchie ụlọ na a nzuzo steepụ. Kynance Mews na Kensington bụ nnọọ ihe ndị kasị mma Okporo ámá Na Europe. na mgbụsị akwụkwọ, n'okporo ámá glows na green na burgundy epupụta, na mgbe spring abịarute, ụlọ ndị ghọọ a-acha odo odo ọhịa. Nke a na ebe nke London bụ bụla blogger echiche nke heaven!
The ọcha mgbidi na-lined na-apụghị ịgụta ọnụ, jide ifuru akụwa jupụtara geranium na carnations, enye a dị ebube pop nke agba nke a pụrụ nnọọ iche akụkụ nke obodo. Yana ya warara, cobbled n'ala, archways nkume, na n'ezie ihe ndozi mgbidi mara mma, na Mezquita Cathedral bụ na echiche site n'etiti mgbidi na-eme maka zuru okè adianade ihe ugbua zuru okè foto.
A tọhapụrụ ya na a obere square dị nso na Primrose Hill, ị ga-ahụ otu n'ime ndị kasị mma n'okporo ámá Na Europe nakwa dị ka kasị Instagrammable! Weregodị a Ahịrị nke mara mma pastel townhouses na-eguzo elu, curving gburugburu obere, green park na bụ Chalcot Square. Ọ na-a nkume-ewepụkwa Regents Park na ama Camden Market.
Enwe a stroll ala Edinburgh cobbled Victoria Street jupụtara fun, pụrụ iche ụlọ ahịa, na eateries. Victoria Street bụ a siri ike ibe nke obodo akụkọ ihe mere eme na ya nkume mgbidi na afọ iri na amara-adọta ndị ọbịa si nile. Jide n'aka na ị na-eje ije ruo Grassmarket nke malitere na narị afọ nke 14 na akanyam ụdị nile nke obodo mepụtara na ibe n'ibe ịtụtụrụ.
Nyhavn na-akọrọ igbe maka ịbụ okporo ụzọ ọdụ ụgbọ mmiri zuru oke na-agba agba na agba, na idyllic ụgbọ mmiri masts, kọfị dị ụtọ, na ụlọ oriri na ọ classụ classụ ndị mara mma na-ekpuchi n'akụkụ abụọ. Obodo a na-etu ọnụ na Copenhagen quirky ikuku na hipster vibe nakwa dị ka ndị kasị ọmarịcha n'okporo ámá na obodo. No trip to Copenhagen is complete without a stroll and a photo here though.
A ije (ma ọ bụ ụgbọ mmiri siri) ala a mara mma n'okporo ámá na Venice bụ dị ka na-ewere a tour nke egwurugwu. Burano bụ agwaetiti gburugburu Venetian laguunu, ma ọ bụrụ na ị na-ebi kechioma leta gị ga-nwụchiri gị igwefoto (ekwentị) ozugbo. The ụlọ na-ahụ mara mma kanaal na-agba ọsọ ogologo site na ọ na-eme ya otú enchanting. Ọ bụ ụdị ebe nwere ike ibuli ọnọdụ onye ọ bụla n’otu ntabi anya.
Were a stroll ala ụwa na-ama East Side Gallery. A n'okporo ámá na n'ezie ghe oghe gallery techie niile tinyere foduru nke Berlin Wall. E nwere Insta ohere galore ala n'okporo ámá dị ka sere bụ ịrịba, ma ọ bụ na-a chilling ncheta nke Berlin akụkọ ihe mere eme na Agha Nzuzo.
Ị chọrọ Embed anyị blog post “10 Kasị Beautiful Okporo ámá Na Europe Iji Explore” na na gị na saịtị? Ị nwere ike ma na-ewe anyị foto na ederede na-enye anyị n'aka na a njikọ a blog post. Ma ọ bụ pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fmost-beautiful-streets-europe%2F%3Flang%3Dig – (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)